ज्या,नकै बाजी थापेर पनि हार्नुपरेको एउटा ‘जुठो प्रेम’ – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/ज्या,नकै बाजी थापेर पनि हार्नुपरेको एउटा ‘जुठो प्रेम’
ज्या,नकै बाजी थापेर पनि हार्नुपरेको एउटा ‘जुठो प्रेम’
“कुन हो कागजमा दस्तखत गर्न आउनु भनेर खै कसले पो फोन गरेको थियो,” उर्मिलाले बाह्रखरीसँग रुँदै भनिन्, “छोरालाई के कति कारणले मारेको हो ? अहिले हातहतियार बोकेर गएकाले लखेट्नुपरेको हो भनेर गाउँलेले बयान दिएका छन् भन्ने सुनेको छु । हतियार बोकेर गएकै भए पनि चौकीमा बुझाउने कि मारेर खोलामा फालिदिने ?”उनले चौरजहारी ८ का सबैलाई पक्राउ गरेर बयान लिनुपर्ने बताउँछिन् । ढुङ्गाले हिर्काइहिर्काइ मान्छे मार्दा पनि समाज रमिते बनेको उनको आरोप छ । “कस्ता मान्छे हुन् त्यहाँका ? दलित भएर ठूलो जात ताक्दै हिँड्ने भन्छन् रे ? गाउँ नै मिलेर दलित भन्दै मार्दै गर्न पाइन्छ ? देशमा न्याय, निसाफ, कानुन छैन ?” उनी आक्रोशित हुँदै प्रश्न गर्छिन् ।एक्लो सहारा गुमाएर विह्वल बनेकी उर्मिलाको न्याय पाउने आश मरिसकेको छ । गरिबीबाट निर्मम डामिएकी उर्मिलालाई पुत्रशोकको पीडा पनि थपिएको छ । “दलित भनेर सबैले हेलाहाँसो गर्दा रहेछन् । ठूलो जातको चेलबेटीमा आँखा लगाएपछि यस्तै हो भनेर अरूले पनि खासै वास्ता गरेका छैनन् । हाम्रो त कोही रहेनछ !,” उनी आश मार्दै भन्छिन् ।भिडियो हेर्नुहोस